Yakanakisa ChakagadzirwaCrystalGrower-Rare-PasiCompositeCeramicThermalField Mugadziri uye Fekitori | FunMeet
Rare oxide Yakaumbwa SS Ceramic Thermal Munda
Synthetic Crystal ndeimwe mhando yemakristasi akakosha mumauto nemauto.
Kusvika pari zvino, pasi rese 'S Synthetic Crystal mabhizinesi akashandisa simbi, ZrO2 Fiber, gobvu ZrO2 zvidhinha etc.mhando yepamusoro yeminda. Iyo yesafire ingot yakasvibiswa, shrinkage, yakaremara, kudonha kwemhepo inopisa, nezvimwewo zvinetso zvinomuka.
Rare pasi oxide (RE) doped yttria yakadzikamisa zirconia (YSZ) ndiyo imwe yenzira dzinoshanda dzekuvandudza kupisa kwekushisa kuita uye kwakanyanya tembiricha kugadzikana kwetsika YSZ yekupisa yekuvhara mipendero.
Muchimwiro chenguva dzose R & D, kuvandudza, zvinobudirira kugadzirwa imwe yepamberi ceramic thermal munda-- Solid Solution Ceramic Composite Thermal Munda. Iine pazasi zviri pachena maficha:. Ultra Yakadzika-Deformation. Vashoma oxide Volatilization · Inokurumidza Kuburitsa Oxygen. Super Yakaderera Energy Mutengo. Yakareba Kushanda Hupenyu.
Isu tinogadzira bi-layer yakasanganiswa thermal munda. Mukati mune Hi- Temp. Resistant layer, Yekunze ndeye Bubble ZrO2 polymer bhora rukoko, inochengetedza zvemukati zvidhinha, zvakare max insulating basa, chii chiri che gradient kudzikamiswa kwekuyambuka tembiricha, panguva ino zviri pachena kuchengetedza simba rekushandisa.
Nekuvandudzwa kwepamusoro-kuita gasi turbine, iyo inlet tembiricha yepamusoro-yekumanikidza turbine inoramba ichiwedzera, iyo inounza yakanyanya kuoma sevhisi nharaunda yeanopisa magumo zvinhu senge moto wemoto mukamuri, chipande uye muswe kamwene. Yakajairika-yepamusoro-tembiricha simbi alloy zvave zvakaoma kusangana nezvinodiwa zvebasa. Mumakore achangopfuura, kupisa kwemhepo kunodzivirira kwave kuchishandiswa zvakanyanya. Parizvino, ndiyo yakanyanya kushandiswa yttria yakadzikamisa zirconia (YSZ) yekupisa yekudzivirira chipinganidzo zvedongo zvinhu. Nekuda kwematambudziko echando tembiricha shanduko, sintering kumhanyisa, yakanyanya tembiricha mwaranzi kupisa kuchinjisa uye yakanyungudutswa munyu ngura pakukwirira tembiricha, kumwe kushanda kwayo kushoma.
Isu tinogadzira uye tinogadzira inowanda tembiricha munda weKyropoulos Nzira 120kgs Sapphire Ingot pachedu. Pamusoro pekuona chiyero che100% yapera chigadzirwa, simba rekudyara rakabudirira kuunza pasi kusvika 59KW kubva ku75KW. Iye zvino kazhinji simba rekuchengetedza pamoto ndeye 10000 deg, kunyangwe inogona kusvika 1 5000-18000deg.
Pashure: Zirconia Lip brickin girazi choto
Zvadaro: Kavha ndiro uye yemuromo zvidhinha zvepamusoro zirconium photovoltaic girazi uye shale girazi